को’रोना नियन्त्रणका लागि पूर्णिकाले दिइन् सरकारलाई कारण सहितको यी ५ सुझाव ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/को’रोना नियन्त्रणका लागि पूर्णिकाले दिइन् सरकारलाई कारण सहितको यी ५ सुझाव !
को’रोना नियन्त्रणका लागि पूर्णिकाले दिइन् सरकारलाई कारण सहितको यी ५ सुझाव !
काठमाडौं। विश्वभर को’रोनाको क’हर चलिरहदा नेपालमा पनि यस्तो त्रा’स व्यापक छ।नेपालमा को’रोना नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई ५ सुझाव । यसरी काम गरे धेरैमा ३ महिनामा पूर्ण नियन्त्रण आउनेछ ।
१) भारतिय सि’मामा भएका / विदेशबाट आउन चाहने नेपालीहरुलाई अविलम्ब को’रोना test गर्दै छि’राउनुहोस । जसको positive आउँछ वहाँहरुलाई उतै देशमा राजदुतावासको सहयोगमा उपचार हुने ब्यवस्था मिलाउनुहोस ।
यसो हुँदा लु’किछि’पी सि’मा पार गरेर कोहिपनि आउने छैनन र track गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
२) हस्पिटलका डाक्टर ,नर्स, एम्बुलेन्स चालक , कर्मचारीहरुको को’रोना test गर्नुहोस र त्यहाँ भर्ना भएका सबै बि’रामीहरुको को’रोना test गर्नुहोस । प्रत्येक हस्पिटलमा कर्मचारी र डाक्टरको test गराईसकेपछी शुल्क लिएर नै भएपनि उक्त हस्पिटलमा आउने नयाँ बि’रामिलाई gate मै corona test गराउने ब्यवस्था गराउनुहोस ।
– यसो गर्दा हस्पिटलबाट आगामी दिनमा को’रोना फैलने छैन ।
३) चोक चोकमा भएका पसल , मार्ट , डेरि , बेकरी , कपडा पसल, मेडिकल आदि जस्ता भी’ड हुने ठाउँका ब्यापारीको र त्यहाँ सामान ओसार्ने ढुवानिकर्ताहरुको को’रोना टेस्ट गराउनुहोस । त्यसपछी पसल / पसलमा पनि सामान किन्न आउनेलाई rapid test kit को ब्यवस्था गर्नुहोस । पसलमा सामान किन्न आउने नयाँ ग्राहकलाई अनिवार्य rapid test गराउनुहोस र प्रत्येक १५ दिनमा फेरि repeat गर्नुहोस ।
सामान किन्न आउँदा को’रोना रिपोर्ट negative भएको प्रमाण चाहिने ब्यवस्था गर्नुहोस ।
– यसो गर्दा बजारबाट र भी’डभा’ड स्थलबाट को’रोना फैलने छैन
– यसो गर्दा एउटा वडाबाट अर्को वडामा को’रोना फैलने छैन ।
यदि यती ५ काम गर्न सक्नुभयो भने सम्भावीत को’रोना सं’क्रमीतहरु सबै tracking हुन्छन । को’रोना संक्र’मण बढ्ने क्रम पनि रोक्किने छ । धेरैमा ३ महिना भित्रमा को’रोना सं’क्रमण पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउने छ ।
त्यसो हुँदा मात्र यो लक डाउन सफल हुन्छ । नत्र, लक डाउन भनेर जनता थुनिरहने । उता भुसमा आ’गो स’ल्किएको जसरी आ’गो स’ल्किइरहने हुन्छ । सरकार त पूर्ण रुपमा असफल हुने नै छ त्यो भन्दा ठूलो कुरा प्यारा जनताहरुले प्राण गुमाउनुपर्ने छ ।
यी विषय अविलम्ब लागू गर्नुहोस सरकार । हामिले को’रोना नियन्त्रणको लागि भारतको हैन दक्षिण कोरियाको तरिका अपनाउनु पर्छ । भारतले लक डाउन बढाए यता पनि बढाउने , उता खोल्यो भने यता पनि खोल्ने , उता खुकुलो बनाउदा यता पनि खुकुलो बनाउने गरेर नेपालमा नियन्त्रण हुँदैन ।
जब यी बालिका जन्मिनासाथ २ गोली हानियो (भिडियोसहित)
यस्ता व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको भ्याक्सीननले समेत काम नगर्ने !